देश नै नरहने माग कुनै देशले किन पुरा गर्छ?
यो अन्तरवार्ता मलाई प्रासंगिक लागेको छ।
मधेसको माग पूरा गरे देशै रहँदैन
संंविधानमा असन्तुष्टि जनाउँदै मधेसी दलले आन्दोलन गर्दा जनजीवन अस्तव्यस्त भएको छ । संविधानका विभिन्न बिषयमा असहमति हुँदाहुँदै पनि राप्रपा नेपालले त्यस्तो बाटो रोजेन । गैर–संवैधानिक प्रकृयाबाट देशै टुक्राउने लक्ष्य राखेर मधेसी मोर्चाले गरेको आन्दोलनप्रतिचाहिं माथापच्ची गरिरहनु परेको छ । ..... गिरिजाबाबुले राजालाई किनारा लगाउने अनि समस्याको समाधान गर्ने भनेर ८ बुँदे सम्झौता गरे । अहिले मधेसी दलको माग त्यही ८ बुँदे सम्झौतामा आधारित छ । ......
यथार्थ यो हो कि ती माग पूरा गरेको खण्डमा देशै रहँदैन । अनि कसरी माग पूरा गर्न सकिन्छ । समस्याको चूरो यो हो ।
......... जनताको पक्षमा भनिएको मधेसी आन्दोलन केहि सीमित व्यक्तिको स्वार्थका लागि मात्रै देखिएको छ । विदेशीको सहाराबाट नेपाली जनताको माग पूरा हुन सक्दैन । जनताको चाहना बुझ्न बरू जनमत संग्रह गर्न सकिन्छ । जनताको अभिमत स्वीकार नगर्ने अनि विदेशीको मत लिने परिपाटी मधेस आन्दोलनमा देखिएको छ । ....... ०६२–६३ सालमा भएको आन्दोलन राजाको निरंकुशताको अन्त्यको लागि मात्रै थियो । तर गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता भन्ने कुरा बीचमा घुसाइयो । अहिलेको समस्याको अर्को कारण त्यो पनि हो ।
गणतन्त्र आएपछि राजाले गर्न अस्वीकार गरेका काम धमाधम गरिए । त्यसैमध्येको एउटा हो ४० हजार भारतीयलाई नागरिकता दिने गरि गरिएको निर्णय ।
त्यही कारणले अहिले तराइमा बल्झिएको हो । सरकाले यस्ता बिषयलाई पुनः छलफल गरेर गहन छानबिन गर्नुपर्छ । विदेशीको हातमा पुगेको नागरिकता खारेज गर्नुपर्छ । त्यसपछिमात्रै समस्या समाधान हुन्छ । ........ अधिकांश माग सम्बोधन भएको अवस्थामा मधेसी मोर्चा आन्दोलनमा लाग्नु नै रहस्यको कुरा हो ..... यो संविधान राप्रपा नेपालले भनेजस्तो पनि बनेको छैन । कांग्रेस, एमाले वा माओवादीले भनेजस्तो पनि बनेको छैन । र, मधेसीले भनेजस्तो पनि बन्दैन । किनकि यो सम्झौताको संविधान हो । जसलाई दुई तिहाइको बलमा परिवर्तन गर्ने अधिकार प्राप्त छँदैछ । त्यसैले जनतालाई दुःख दिएर होइन, विधि र प्रक्रियामार्फत संविधान परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ । हरेक प्रजातन्त्रवादी यो मान्यतामा मान्यतामा आउनै पर्छ । जनतालाई दुःख दिएर जनताकै लागि लडेका हौं भन्नु हास्यास्पद हुन्छ । ...... अहिले देश भूकम्पको पीडामा पनि छ । १४ ओटा जिल्ला तहस–नहस भएको छ । मानिसको मनसमेत भत्किएको छ, ओत लाग्ने ठाउँ छैन । अर्कातिर मधेस आन्दोलनले मुलक आक्रान्त छ । भारतको नाकाबन्दीका कारण जनताले कष्ट भोग्नु परेको छ । यो समस्या समाधान गर्न सबै मिल्नुपर्छ भनेर नै पार्टी सरकारमा गएको हो । यदि हामीले आशा गरेअनुसार उनले काम गरेनन्, धरातल छोडे भने
कुनैपनि बेला सरकारबाट बाहिरिन सक्छौ ।
....... स्थानीय विकास मन्त्रालय सरकारसँग जोडिएको विषय भयो । जनताको घरघरमा यसको संरचना छ । त्यसकारण यसलाई व्यवस्थित गर्न तथा प्रान्तिय र आम निर्वाचनको तयारी गर्नुपर्ने हुँदा हाललाई परराष्ट्रसहित स्थानीय विकास मन्त्रालय अध्यक्षले नै हेर्ने भन्ने पार्टीको निर्णय हो ....... संवैधानिक राजतन्त्र, हिन्दु राष्ट्रलगायतका विषयमा मत विभाजन हुँदा कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले साथ दिएनन् । तर, भोट हाल्दा सबै नेपाली जनताले कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका प्रतिनिधिलाई पनि हिन्दु देखेरै भोट हालेका थिए । तर उनीहरूले जे गरे, त्यो नेपाली जनताले हेरिरहेका छन् । अहिले हिन्दुत्व राप्रपा नेपालमा मात्रै रहेछ, उसलाई भोट नदिँदा ठूलो गल्ती गरिएछ भन्ने महसुश उनीहरुले गरेका छन् । यो नै पार्टीको उपलब्धी हो । ....... हामी संख्यामा हारेका हौं तर जनतामा गएर फेरि त्यसलाई स्थापीत गर्ने आधार बाँकी नै छ ।
जनताले हिन्दु राष्ट्रमा विश्वास व्यक्त गरे देशको पहिलो शक्ति बन्न सक्छौं ।
..... अहिले नयाँ शक्तिको चर्चा भइरहेको छ । वास्तवमा राप्रपा नेपालको लक्ष्य नै नयाँ शक्ति निर्माण हो । हाम्रो नयाँ शक्ति भनेको नेपाली जनताको सुख र समृद्धि हो ।
तर यसलाई मानने हो भने केही कुरा मान्नु पर्ने हुन्छ।
पहिलो कुरा त के मान्नु पर्यो भने मधेसी भनेको नेपाली नै होइन। यो कुरा मानने हो भने मधेस आंदोलन भनेको अराजकता मात्र हो, राजनीतिक आंदोलन नै होइन।
नेपाली हो को? बर्मा, भुटान, असम मा पनि नेपाली छ। असम को गवर्नर नै अहिले एउटा यस्तो व्यक्ति छ जसले आफुलाई नेपाली भन्छ। कस्तो देश भारत? कस्तो राज्य असम? नेपाली गवर्नर हुन पाउने? त्यो गवर्नर ले आफु नेपाली यस मायने मा भनेको कि राज ठाकरे मराठी हो, मोदी गुजराती हो, म मराठी, गुजराती होइन, म नेपाली हो भनेको। उसले नागरिकता को कुरा गरेको होइन, जातीयता को कुरा गरेको। नागरिकता त ठाकरे, मोदी सबै को भारतीय हो। नागरिकता राजनीतिक सम्बन्ध को कुरा हो। जातीयता सांस्कृतिक, पारिवारिक आदि हुने हुन्छ। भने पछि असम को नेपाली गवर्नर र नेपालका मधेसी को जात मिल्छ त? पक्कै मिल्दैन। नेपालका मधेसी को जात मिल्ने भनेको लालु सँग, नीतिश, अखिलेश सँग। तर लालु सँग, नीतिश, अखिलेश सँग भारतको नागरिकता छ, नेपालका मधेसी सँग त्यो छैन। जात मिल्ने नागरिकता नमिल्ने। कोही सँग जात नमिल्ने, नागरिकता मिल्ने, कोहीसँग जात मिल्ने नागरिकता नमिल्ने, आखिर को हो यो मधेसी? आयो कहाँ बाट? चाहेको के मधेसीले?
कोही मान्छे छ जसले न कहिले कम्प्यूटर देखेको छ, न त्यो के हो थाहा छ। अनि उसले एक जना कोही मान्छे तीन घंटा सम्म त्यो कम्प्यूटर को अगाडि बसेको देख्यो भने के भनला? आँखा बंद छैन। आँखा बंद छ भने ध्यान गरेको भन्ने। आँखा खुला छ। भने पछि ध्यान गरेको होइन। मधेसी को हो नबुझ्ने लाई, लोकतंत्र भनेको एक व्यक्ति एक मत हो भन्ने कुरा नबुझ्ने लाई, कसैलाई नागरिकता पत्र विहीन राख्न पाइँदैन, त्यो मानव अधिकार को हनन हो भन्ने नबुझ्ने लाई, यो मधेस आंदोलन अराजकता नै लाग्छ।
मैले कहिले भात खाएकै छैन भने, मैले कहिले चामल देखेकै छैन भने, कसैले भात खाएको देखदा म असमंजस मा पर्ने संभावना हुन सक्छ। आखिर त्यो मान्छे ले मुखमा क्वाप क्वाप राखेको हो के? ती सेता सेता ऑक्सीजन का दाना हुन कि के हुन? तर मैले आजीवन दिनमा दुई पटक भात खाएको छु भने अर्को मान्छे ले भात खाएको देख्दा के खाएको भन्न मिल्छ? भन्यो भने मैले ढाटेको हो कि होइन?
मधेसी को जातीय पहिचान भात हो। मधेसी ले गरेको आंदोलन भात हो। मधेसी ले खोजेको एक व्यक्ति एक मत लोकतंत्र भात हो। मधेसी को भारत मा हुने बिहेबारी भात हो। मधेसी ले चाहेको एक मधेस दो प्रदेश संघीयता भात हो।
खस को जातीय पहिचान छ, त्यो पहिचान भारत मा अझ बढ़ी मजासंग फस्टाएको छ नेपालमा भन्दा। खस ले गरेको प्रत्येक राजनीतिक आंदोलन मा मधेसी को सहयोग अपरिहार्य रहेको छ। त्यत्रो इतिहास छ। खस त १००% भारत बाट आएको समुदाय, भारतमा बिहेबारी नहुने कुरै भएन। खस ले संघीयता नबुझेको हो भने सात मध्ये छ प्रदेश मा खसको वर्चस्व हुने गरी कसरी कोर्यो नक्शा?
सन १९५० मा नेपालको जनसंख्या ८३ लाख थियो भनेर नेपाल सरकारले भन्छ। सन १९५८ सम्म मधेसी ले काठमाण्डु जान वीसा लिनुपर्ने व्यवस्था थियो। त्यो ८३ लाख मा मधेसी गनेको होइन होला। ८३ लाख जनसंख्या वार्षिक औसत ३% ले बढेको हो भने त्यो २३ वर्षमा दोब्बर हुन्छ। अर्थात १९७३ मा एक करोड़ ६६ लाख। सन १९९६ मा आएर तीन करोड़ ३३ लाख। सन २०१९ मा ६ करोड़ ६६ लाख। वार्षिक २% वृद्धि दर हो भने ३५ वर्षमा दोब्बर हुन्छ। वृद्धि दर २.५% हो भने २८ वर्ष मा दोब्बर हुन्छ। सन १९५० को ८३ लाख सन १९७८ मा एक करोड़ ६६ लाख। सन २००६ मा आएर तीन करोड़ ३३ लाख। त्यसमा अझ मधेसी जोड़ेकै छैन।
सन १९६० मा तराई मा पहाड़ी ६% थियो अहिले ३६% भयो। त्यो भारत बाट मान्छे पसेर त्यसो हुन्छ कि पहाड़ बाट मान्छे मधेस झरेर त्यसो हुन्छ?
एकोहोरो किसिमले नेपाल पहाड़ बाट मान्छे भारत पनि ठुलो संख्यामा छिरेको छ मधेस पनि झरेको छ। किनभने अमेरिका बाट मेक्सिको मान्छे जाँदैन, मेक्सिको बाट अमेरिका पुग्छ। तर नेपालबाट जति मानिस भारत छिरेका छन त्यो लुकाउन नेपालको जनसंख्या जति हो त्यति भनिँदैन। हाम्रा मानिस भारतमा ८० लाख मात्र हो भन्छन। अंक गणित मिलिराखेको छैन। ७० लाख त प्रचंड ले मात्र प्रेशर कूकर बम पड़काएर पठायो, जम्मा ८० लाख मात्र कसरी भयो? कति छ भारत लाई पनि थाहा छैन। हिन्द महासागर मा कति पानी छ कसलाई के थाहा? कति बाल्टी पानी होला हिन्द महासागरमा?
नेपालबाट भारत मान्छे जान पाऊँछ। १९५० को संधि ले त्यो दिएको छ। बस भाड़ा चाहिं लाग्छ, त्यो बाहेक अरु केही लाग्दैन। वीसा पासपोर्ट केही लाग्दैन। कहीं नभएको जात्रा हाँडी गाउँ मा। दुनिया मा अरु कतै छैन यस्तो। अरु जहाँ पनि वीसा पासपोर्ट चाहिने हुन्छ। कनाडा अमेरिका दुबै गोरा देश, दुश्मन पनि होइन, तर बॉर्डर टाइट छ। पहाड़ बाट मधेस झर्न पाउने हुन्छ। त्यो आधुनिक राज्य को सिद्धांत हो। एउटा देशभित्र मान्छे जुन सुकै ठाउँ मा जान पाऊँछ। जागीर खान पाऊँछ, घरजम गर्न पाऊँछ। त्यो जुन सुकै देशमा त्यही हो।
मधेसी को जातीयता, अनुहार, लुगाफाटा भारत को हिंदी बेल्ट का मान्छे सँग किन मिल्न गयो भनेर वाल्ल पर्ने जुन व्यवहार देखाइन्छ, त्यो नौटंकी हो, मनोज गजुरेल को प्रहसन। मधेसी कहाँ बाट आयो भनेर जुन जिज्ञासा राखिन्छ, भुटान को मान्छे लाई भुटानी किन भनियो, पाकिस्तान को लाई पाकिस्तानी किन भन्ने बुझ्छन। मधेसी मधेस को खाँटी मान्छे भएकोले नै मधेसी भन्ने गरिएको होला। कि कसो? हजारौं वर्ष को इतिहास छ। अझ पाहुना मान्छे ले मधेसी यहाँ कहाँ बाट आयो भन्ने?
मधेस मा भारत बाट टन्न मान्छे आउने गरेको भए सन १९५८ मा मधेसी थियो मधेस मा ९४% अहिले त्यो बढेर हुनुपर्ने ९८% अझ ९९% तर त्यो घटेर भएको छ ६४% -- अझ उल्टो!
मधेसी ले भनेको छ, आयौ ठीक छ, मजासंग बस। तर यो कनि बैठे दिय, कनि गोर पसारे दिय, कनि सुतहु दिय सम्म ठीक छ। अब आएर यो घर नै मेरो भन्ने?
मधेसी को माग पुरा गरे देश रहँदैन भनेको कुन देश हो त्यो गायब हुने? मधेसी ले राजनीतिक अधिकार पाए पहिला नेपाल कब्ज़ा गर्छ त्यस पछि युद्ध गरेर भारत पनि कब्ज़ा गर्छ भनेको कि के भनेको? देश नरहनु भनेको के? देश नरहनु भनेको मधेसी प्रधान मंत्री हुनु हो? मधेसी सेनापति हुनु हो? मधेस मा मधेसी मुख्य मंत्री भयो भने देश गायब हुने हो? देश नरहनु भनेको के? कि अझ ठुलो भैंचालो गएर देश पाताल पुग्ने हो। मधेसी सँग के छ त्यस्तो क्षेप्यास्त्र?
नेपाल भारत भुटान बंगलादेश ले १० वर्ष भित्र आर्थिक एकीकरण गर्ने भनेर बजाप्ते सही गरेका छन। नेपालमा चाहिँ र ले बदमाशी गरेको हुन सक्छ। जुन सुकै मुद्दा मा र ले बदमाशी गर्ने यसमा गरेन भन्नु तार्किक हुँदैन। भुटान लाई भारतले हपकाएको हुन सक्छ। तर बंगलादेश ले त स्वेच्छाले सही गरेको हो। बड़ो सोंच विचार गरेर आफुलाई फाइदा हुने देखेर सही गरेको हो। त्यो आर्थिक एकीकरण भनेको के? चार देशका मानिस चार मध्ये जुन सुकै देशमा गएर काम गर्न पाउने। चार देशमा एउटै मुद्रा चल्ने। राजनीतिक रुपले फरक फरक भए पनि आर्थिक रुपले एउटै देश। दुनिया भरि बाट जसरी सहज ढंगले पूँजी भारत आउने गरेको छ, त्यसरी नै नेपालमा पनि आउने भो। त्यो एकीकरण पछि नेपाल भूपरिवेष्टित देश हुँदैन। कति राम्रो। हामीलाई यूरोपियन यूनियन मा किन नलिएको भनेर टर्की ले चित्त दुखाएको दुखायै छ। किन होला? के टर्की मा राष्ट्रियता नामको चीज छैन? के टर्की का जनता स्वाभिमानी छैनन? के टर्की मा र घुसेको छ?
मधेसी लाई marginalize गरेर नेपाल अगाडि बढ्ने हो भने त नेपाल अहिले कमसेकम ब्रुनाई हुनुपर्ने। मधेसी लाई marginalize गरेको आज देखि हो?
Labels: Constituent assembly constitution federalism India Madhesh madhesi madhesi kranti3Nepal Terai
A "Solution" That Is No Solution At All
Laloo Yadav: Opposition Leader
व्हिप जारी गर्ना साथ संविधान सभा अवैधानिक बन्यो, स...
प्रचंड धमिलो पानीमा माछा मार्न खोज्दैछन्
प्रवासी नेपालीको उदेकलाग्दो व्यवहार
Caste Capitalism In Nepal
के काठमाण्डु उपत्यका लाई तीन प्रदेश मा विभाजन गर्न...
समाधान यसरी निस्कन्छ
नवलपरासी देखि बर्दिया सम्म, आगरा देखि गागरा सम्म
स्वतंत्र मधेस देश का जनसंख्या
युरोप ले हात झिक्न मा भारत को के रोल छ?
आर्थिक क्रांतिका पाँच पाण्डव: सुशासन, शिक्षा, स्वा...
सार्वभौमसत्ता जनतामा हुनु
नेपालमा माओवादी गृह युद्ध किन भयो?
नेपालका खस: बढ़ी खरानी धँसने जोगी
देश टुटाउने कि देश उडाउने
मधेसीले संघीयता बुझेको भएर एक मधेस दो प्रदेस भनेको...
मधेसी मथिको दमन को लामो श्रृंखला
नेपाल भित्र भारत प्रति अविश्वास र जल विकास
एक मात्र उपाय
एक मधेस दो प्रदेश बटमलाइन हो
नेपालको प्रत्येक खस अहिले मधेसी लाई ओलीका आदमी लाग...
बाबुराम आफै मितेरी पुलमा छन
सप्तरी मा गरिएको युद्ध घोषणा एउटा निर्णायक मोड़ हो
मौका मा चौका हान्ने बेला: नया शक्ति अभियान ले मधेस...
थारु लाई विशेष क्षेत्र बनाउँछु भन्नु विशेष क्षेत्र...
मधेसी आंदोलनकारी संयमित हुनुपर्छ
क्रांति को माग पुरा गर, फ़ासिस्ट धम्की दिएर आफ्नो न...
बाबुराम को झंडा: एक सुझाव
बाबुराम को समाजवाद बाबुराम लाई सलाम
नेपाली ले इंडिया मा चौकीदारी किन गर्छ?
दुई चरण मा सीमांकन नामांकन
झापा का बाहुन हरुको दिमाग खाली छ
एक मधेस दो प्रदेश तु भी देगा तेरा बाप भी
बाबुराम को चुनाव चिन्ह: चक्र (एक सुझाव)
मधेस आंदोलन को उद्देश्य पहाड़मा एमाले को जरो काट्नु...
प्रदीप गिरी बाबुराम को पार्टी छिरेको राम्रो
यो पुन मानसरोवर पुगेर आयो
झापा त Sensitive Zone हो, चीनले बुझ्नुपर्छ
महंथ र उपेन्द्र वीरगंज पुग्नुपर्छ
झापा का बाहुन ले संघीयता नबुझेको यो पहिलो पटक होइन...
दार्चुलामा भूकम्पको धक्का: यो आत्तिनुपर्ने कुरा हो...
एक चोटि नक्शा हेरौं
लंदन लाई एक नंबर प्रदेश मा गाभौं
काठमाण्डु का जनताले सिंह दरबार र बालुवाटार घेर्नुप...
झापा मधेस होइन भने चुरिया सगरमाथा हो?
The Warped Reality Of Nepal's Ruling Elite
नाकाबंदी टाइट नभएको हो? अझै टाइट पार्नुपर्यो?
तीन बाहुन दल ले लिडे ढिपी गरिरहे कुरा कहाँ पुग्छ?
जिल्ला टुक्राउने होइन जिल्ला गायब पार्ने
आपुर्ति सहज र सामान्य गर्ने सजिलो तरिका
संघीय मोर्चा भित्र लोकतान्त्रिक प्रतिस्प्रधा
प्रत्येक शहीद को घर मा १० लाख न पुगेसम्म सीमांकन ब...
14th Dalai Lama2
16 point agreement11
1700 Cascadia earthquake1
1934 Bihar earthquake1
1972 Nicaragua earthquake1
2006 April Revolution6
2010 Haiti earthquake12
2015 nepal earthquake103
56 kbit/s modem1
6th Queen Elizabeth's Own Gurkha Rifles1
A Beautiful Mind1
A Long Walk to Freedom1
adt home alarm1
ADT home security1
aishwarya rai bachchan1
alliance for democracy and human rights in nepal1
Alzheimer's Research UK1
anga raj timilsina1
anil jung shahi1
Anil Kumar Jha1
Anti Federal Alliance1
Apartheid in South Africa1
Architecture of Kathmandu1
arju rana deuba2
arjun narsingh kc1
Armed Police Force6
Asian Development Bank5
B R Ambedkar3
bahadur shah jaffar4
Bahujan Samaj Party1
bahuns of nepal1
Bam Dev Gautam4
bharat mohan adhikari1
Bharatiya Janata Party12
bhatta law firm1
BibekSheel sajha party4
bijay kant karn1
Bijaya Kumar Gachchhadar5
Birendra of Nepal3
blog post ad1
Board of governors1
Boeing CH-47 Chinook5
Breach of contract1
brikhesh chandra lal7
British Armed Forces1
Broadcast relay station1
build own operate transfer1
C. K. Raut4
Cascadia subduction zone1
Central Intelligence Agency1
Central Tibetan Administration2
cheap earthquake proof homes1
Chinese Academy of Engineering1
Clear Broadband Internet1
Clear Wireless Internet1
Clear Wireless Internet 4G1
Climate change mitigation1
common minimum program1
Communist Party of China3
Communist Party of India (Maoist)1
Communist Party of Nepal39
Communist Party of Nepal (Maoist)7
Communist Party of Nepal (Unified Marxist-Leninist)9
Communist Party of Nepal-Unified7
Comprehensive Peace Accord2
Constituent assembly revival1
Constitution of India1
Constitution of Nepal1
Dalit Janajati Party2
Darshan Rauniyar For Congress1
democracy for nepal1
Democratic Republican Alliance1
Demographics of Nepal14
Dial-up Internet access1
directly elected executive2
directly elected president15
directly elected prime minister10
Doctor of Philosophy1
dr ck raut4
early stage tech company1
earthquake proof homes1
ease of doing business2
East West Highway1
East West Railway1
Elections in Bihar2
electronic voting machines1
Embassy of India1
Everest Base Camp1
Exim Bank of China1
Federal Bureau of Investigation1
federal democratric alliance1
Federal Emergency Management Agency1
federal madhesi front2
federal socialist party2
Foreign Direct Investment13
Foreigner in Nepal1
Former Chief Justice1
free and fair election3
free ck raut global campaign3
free trade area1
freedom of speech19
gajendra narayan singh4
gaurav shamsher jabara1
Gender Empowerment Measure1
Girija Prasad Koirala9
girish chandra lal1
Government of India9
Government of Nepal4
Government of the People's Republic of China1
Govinda Raj Joshi1
Gross domestic product2
Gyanendra of Nepal2
hem bahadur malla1
hindi voice search1
hindu rate of growth3
Human Poverty Index2
Human Rights and Liberties1
human rights watch6
I am indian1
india china institute1
indian blockade 20155
Indian Standard Time1
Induced pluripotent stem cell1
International Campaign for Tibet1
International Covenant on Civil and Political Rights1
international criminal court1
Jackson Heights Queens1
jai krishna goit1
Janamukti Party Nepal1
Janata Dal (United)1
Jay Prakash Gupta5
jay prakash narayan1
Jhala Nath Khanal15
jiwan raj wagle1
jung bahadur rana2
kanak mani dixit8
Kathmandu Hetauda Tunnel Highway3
kathmandu nijgadh fast track1
kathmandu terai fast track1
key search terms1
Khum Bahadur Khadka4
Kids and Teens1
krishna bahadur mahara1
krishna prasad bhattarai1
L. K. Advani1
lal babu pandit1
Lalu Prasad Yadav3
Languages of India1
languages of nepal1
Large Hadron Collider1
law and order7
laxmi prasad devkota1
Lee Kuan Yew6
Legal defense fund1
like we are not nepali1
List of Prime Ministers of Nepal1
longest human chain in world history2
madan krishna shrestha3
Madhav Kumar Nepal15
Madhav Kumar Nepal Prime Minister1
Madhav Nepal Government1
madhesh swaraj party20
madhesi tharu kranti 20151
madhesi andolan 20152
Madhesi Jana Adhikar Forum Nepal28
Madhesi Janaadhikar Forum Nepal1
Madhesi Janadhikar Forum19
Madhesi Janadhikar Forum lontantric4
Madhesi Janadhikar Forum lontantrik1
madhesi janajati dalit kranti 201538
madhesi janajati kranti 2015289
madhesi kranti 11
madhesi kranti 21
madhesi kranti 201555
madhesi kranti 3774
madhesi tharu kranti 201550
madhesi tharu revolution6
mahendra bahadur pandey1
mahendra narayan nidhi5
mahendra raya yadav7
mani shankar aiyyar2
Maps and Views1
Media of India4
melamchi water supply1
Member of Parliament7
mid hills highway1
Minister of External Affairs (India)1
Minister of Home Affairs (India)1
Miss Nepal World 20121
Mohandas Karamchand Gandhi1
mustang thakali kitchen1
Narayan Kaji Shrestha7
narayan prasad sharma1
National Disaster Response Force1
National unity government1
nepal earthquake 20151
Nepal bar association1
nepal civil war2
nepal communist party1
nepal communist party united marxist leninist1
nepal earthquake 201542
nepal economic revolution1
nepal election 20132
nepal india border1
nepal india political union1
nepal royal massacre1
Nepal Sadbhawana Party3
nepal samajwadi janata dal1
nepal students union1
Nepalese Constituent Assembly29
nepali congress convention1
nepali congress party convention1
Nepali Janata Dal2
nepali janata party3
nepali kranti 20152
nepali tech startup2
nepalis in america1
nepalis in nyc1
New York City42
New York City Metro2
new york nepali1
non aligned movement1
Non Resident Nepali21
Non Resident Nepali Association28
one door policy1
one person one vote2
Operation Green Hunt1
padma ratna tuladhar15
pashupati shamsher rana2
Plurality voting system1
political and economic union2
Politics of Nepal3
Prakash Chandra Lohani1
Prakash Man Singh2
Prem Bahadur Singh3
prem prakash thapa magar2
President of Sri Lanka1
President of the People's Republic of China1
Prime Minister Madhav Kumar Nepal1
Prime Minister of India14
prime minister of nepal1
Prime Minister of Pakistan1
Prime Minister of Singapore1
Prime Minister of Sri Lanka1
Prithvi Narayan Shah4
publicly funded elections1
Pushpa Kamal Dahal1
Pushpa Lal Shrestha1
Race and ethnicity in the United States Census1
Raghuvansh Prasad Singh4
Raj Kumar Lekhi2
Ram Baran Yadav69
ram chandra jha2
ram chandra paudel4
ram kewal shah2
ram kumar sah1
Ram Prasad Shrestha1
ram sharan mahat11
Ram Vilas Paswan1
rameshwar raya yadav3
rapid economic growth3
Rashtriya Janata Dal2
rashtriya janata party12
Rastriya Janamukti Party1
Rastriya Prajatantra Party1
Rastriya Prajatantra Party Nepal1
relief and reconstruction100
right to free speech32
right to peaceful assembly40
right to self determination93
Royal Air Force3
Rule of law3
San Francisco Bay Area1
sanghiya samajwadi forum15
sanghiya samajwadi party nepal3
Sarad Singh Bhandari2
Scottish independence referendum 20143
second big earthquake1
Shapes and Colors1
Sharad Singh Bhandari7
Sher Bahadur Deuba47
Sheriff of Nottingham1
Shey Phoksundo National Park1
social democratic party1
Society and Culture1
South Asian Association for Regional Cooperation8
south asian economic union10
south asian entrepreneurs1
Special economic zone3
Sri Lanka Freedom Party1
States and territories of India1
supreme court of nepal12
surkhet jumla road1
surya bahadur thapa2
Swami Atmananda Giri1
Tamsaling Nepal Rastriya Dal3
Television in India2
terai madhesh loktantric party24
terai madhesh sadbhavana party4
The Association of the Nepalese in the Americas1
The Climate Group1
The Himalayan Times1
Three Gorges Dam1
Tribhuvan International Airport10
truth and reconciliation commission2
Truth and Reconciliation Commission (South Africa)1
tul narayan shah1
Tula Narayan Sah1
Tula Narayan Shah2
uncertainty and doubt1
Unified Communist Party of Nepal34
Unified Communist Party of Nepal (Maoist)21
United Democratic Madhesi Front5
United National Party1
United Nations Development Programme1
United States Agency for International Development1
United States Congress1
United States Department of Defense1
United States Geological Survey1
Universal Declaration of Human Rights4
University College London1
University of Illinois at Urbana–Champaign1
University of Toronto1
us civil rights movement1
uttar pradesh 20171
Value added tax1
vijay kant karn1
vivekshil sajha party3
w r bion1
War on Terrorism1
West Lothian question1
World Heritage Site2
World Press Freedom Day1
world's fair marina1
The Decades Already Lived
The US-India-Japan-Australia Alternative To OBOR Should Focus on Broadband And Hyperloop And Drones
मधेसका संघर्ष भारत का अपना संघर्ष है